Shiinaha, gabar sheegtay in ay iib tahay, ogow sababta . | Radio Himilo
Shiinaha, gabar sheegtay in ay iib tahay, ogow sababta .
November 14, 2016 radio himilo
Gabar u dhalatay dalka Shiinaha ayaa ku dhawaaqday in ay iib tahay oo ay dooneyso qof iibsada oo waliba qalbi furan.
Tasawi Mingiwan waa 19 jir , waxa ay ku dhalatay kuna barbaartay magaalada Gogo ee dhacda koofurta dalka Shiinaha .
Warka arintan markii uu soo baxay waxa ay dad badan is weydiiyeen waxa ku riixaya gabadhan in ay is iibiso oo ay daaha ka qaado in ay iib tahay .
Sida wargeyska Global times uu ku soo waramayo, Tasawi waxa ay tilmaamtay in hooyadeed oo 45 jir ah uu ku dhacay cudurka kansarka maqaarka, dhaqaatiirtana ay u sheegeen in ay ku daweynayaan lacag dhan 350.000 oo Yen oo u dhiganta 51,500 doolar.
Sidaa darteedna ay go’aansatay in ay is iibiso si lacagtaasi ay u hesho loona daweeyo hooyadeed oo ay aad u jeceshahay islamarkaana la il-daran cudurka kansarka maqaarka .
Waxa ay intaa ku dartay gabadhaasi Shiinaha u dhalatay in ay jeclaan laheyd in uu iibsado qof qalbi furan sida ay hadalka u dhigtay .
Sheekada arintan ayaa aad ugu baahday baraha bulshadda iyadoo soo jiidatay dad aad u fara badan .
Dad badan ayaa muujiyay sida ay u garab taagan yihiin gabadhaasi yar halka kuwa kale ay sheegeen in hadii booskeeda ay joogi lahaayeen ay ku dhaqaaqi lahaayeen talaabada ay qaaday .
Mar danbe oo sheekadan ay gaartay cid walba ayaa lagu soo waramayaa in Tasawi ay taleefan ka heshay Huwang Tashi oo ah nin maamula hay’ad samafal islamarkaana ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay bixinta lacagta ku baxaysa qaliinka lagu sameynayo hooyada Tasawi oo lacag darteed sheegtay in ay iib u tahay.
Previous PostToban Kooxood ee Mushaarka Ugu Badan Bixiya Ciyaaraha Caalamka Oo Lasoo Saaray iyo Man united oo horboodaysa kooxaha kubbadda cagta.Next PostQiimaha Lagu Burburin karo Qan daraaska David De Gea Oo Shaaca Laga Qaday